Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Israel Vaovao Vaovao » Nanomboka nandefa balaonina fiarovana an'habakabaka goavam-be vaovao i Israely
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Israel Vaovao Vaovao • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Safety • teknolojia • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Niasa mafy i Israely tamin'ny fanatsarana ny fiarovan-drivotrany tato anatin'ny taona vitsivitsy noho ny fanahiana amin'ny fihanaky ny drôna sy ny balafomanga vita Iraniana any amin'ny faritra Afovoany Atsinanana. Ny fanjakana jiosy ihany koa dia lasibatry ny balafomanga vonjimaika sy balaonina fandoroana, nalefan'ny vondrona mpampihorohoro Palestiniana Hamas avy any Gaza.
Hampitombo bebe kokoa ny fahaizan'ny fiarovana an'habakabaka an'i Israely ny balafomanga vaovao sy rafitra fitiliana fiaramanidina.
Ny Sky Dew dia hidera ny rafitra fitsirihana ny tany israeliana efa misy amin'ny alàlan'ny fametrahana sensor fanampiny amin'ny haavo avo.
Ny rafitra, izay novolavolain'i Israely sy Etazonia, dia nandalo fitsapana nahomby tato anatin'ny volana vitsivitsy.
Nanambara ny Minisiteran'ny Fiarovam-pirenena Israeliana fa miomana amin'ny fandefasana blimp goavana izay hitondra rafitra fiarovana an'habakabaka manara-penitra.
Namoaka clip an-tserasera ny ministera tamin'ny alarobia, mampiseho ilay balaonina goavam-be nisondrotra tamin'ny lafiny samihafa.
Araka ny filazan'ny ministera, ny rafitra fanaraha-maso ny balafomanga sy fiaramanidina vaovao manara-penitra dia hampitombo bebe kokoa ny fahaiza-manaon'ny fiarovana an'habakabaka an'i Israely.
Tsy mbola nambara ny mombamomba ny fiaramanidina, izay nomena anarana hoe 'Sky Dew', fa voalaza fa iray amin'ireo lehibe indrindra amin'ny karazany. Ny radarany dia voalaza fa afaka mamantatra ny balafomanga lavitr'ezaka, ny balafomanga fitsangatsanganana ary ny drôna.
Ny rafitra, novolavolain'ny Isiraely ary ny US, nandalo fitsapana nahomby tato anatin’ny volana vitsivitsy ary kasaina hapetraka tsy ho ela any amin’ny faritra avaratry ny firenena, hoy ny minisitera.
Ny Sky Dew dia hameno ny rafitra fitsirihana ny tany israeliana efa misy amin'ny alàlan'ny fametrahana sensor fanampiny amin'ny haavo avo. Ny radara avo toy izany dia manome tombony ara-teknolojia sy fampandehanan-draharaha lehibe ho an'ny fitiliana fandrahonana mialoha sy marina.
Ny minisitry ny Fiarovana Israeliana Benny Gantz dia niarahaba ny blimp ho toy ny “fahavoazana ara-teknolojia iray hafa izay hanamafy ny fiarovana ny lanitry ny Isiraely sy ny olom-pirenena Israeliana.” Ny rafitra vaovao dia “manamafy ny rindrin'ny fiarovana izay naorin'ny Isiraely manoloana ny fandrahonana an'habakabaka lavitra sy antomotra izay naorin'ny fahavalony”, hoy izy.
Ny isan'ny maty tamin'ny lafiny Israeliana noho ny fifampitifirana mafy, nandritra ny fipoahana teo amin'i Israely sy ny Hamas tamin'ny volana Mey, dia olona 12, anisan'izany ny ankizy roa.